Neil Armstrong waxa uu dhashay 05-08-1930 waxa uu ahaa duuliye Maraykanka ah oo ku shaqo leh baadhitaanada duulimaadada aadka u sareeya. waxa kle oo uu ahaa macalin jaamacadeed waxa uu ahaa qofkii ugu horeeyay ee lugihiisa dhiga dayaxa dushiisa taariikhdii uu kudagay dayaxa dushiisa waxa ay ahayd. 20-06-1969kii waxa uu armistaroong dayaxa dulsaarnaa mudo gaadhaysa 2 saaco iyo badh isaga iyo saaxiibkii. waxa isaga iyo kooxdii lasocotay uu kongarayska marykanku gudoonsiiyay bilad sharafeed aad u qiimo sarysa. kahor intii aanuu noqon duuliyaha waxa uu kasoo shaqeeyay ciidanka bada waxa uu kaqaybgalay dagaalkii kuuriya kadib markii dagaalkii kuuriya uu dhamaaday waxa uu ka sheqeeyay oo uu noqday duuliye sameeya tijaabada diyaaradaha dagaalka.
Adeegyadii uu sameeyay[wax ka badal | wax ka badal xogta]
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Neil_Armstrong&oldid=221933"
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 28 Oktoobar 2021, marka ee eheed 09:16.